Fahazoan-dàlana mpivarotra rongony any New Mexico
Nohamafisin'ny fanjakan'i New Mexico ny rongony ampiasan'ny olon-dehibe. Miaraka amin'ny fanamafisana ara-dalàna ny rongony, andiany iray amin'ny fahazoan-dàlana rongony ampiasain'ny olon-dehibe nampahafantarina ny fanjakana.
Raha te hijery izay lazain'ny volavolan-dalàna ianao fahazoan-dàlana mikambana bitika, na mamaky momba ny fangatahana fahazoan-dàlana mpamokatra ho avy varavarankely, azonao atao ny manamarina ireo rohy ireo.
Amin'ity fotoana ity dia hofongarantsika izay HB002 milaza momba ny Lisansa mpivarotra rongony any New Mexico.
Inona ny fahazoan-dàlana hividianana rongony New Mexico?
Araka ny HB002, ny lisansa mpivarotra rongony dia antontan-taratasy ara-dalàna mamela ny tompony hivarotra vokatra amin'ny olona mahay mividy azy. Ilaina ny fahazoan-dàlana mpivarotra mba hanokafana dispensary rongony hampiasa olon-dehibe any amin'ny fanjakan'i New Mexico.
Inona no avelan'ny lisansa mpivarotra rongony any New Mexico hataonao?
Ny fahazoan-dàlana hividianana rongony rongony dia mamela olona na orinasa iray hivarotra ny vokariny amin'ny olona manaraka:
Mpandray anjara mifamaly
Ahoana ny fomba hahazoana fahazoan-dàlana hividianana rongony New Mexico?
Tahaka ny ankehitriny, ny Diviziona fanaraha-maso rongony (CCD) dia tsy nametraka fitsipika momba ny fahazoan-dàlana, na izany aza, rehefa mandeha ny fotoana dia hanavao ny pejiny ny CCD miaraka amin'ny fampahalalana manokana momba ny karazana lisansa rehetra.
Inona avy ireo sarany hahazoana fahazoan-dàlana hividianana rongony New Mexico?
Mba hahazoana fahazoan-dàlana ho an'ny mpivarotra rongony, ny mpangataka rehetra dia tsy maintsy mandoa sarany hatramin'ny dimy hetsy ariary (2,500 $) isan-taona, ary sarany iray hetsy fanampiny ($ 1,000) isan-taona isaky ny toerana misy fahazoan-dàlana.
Fepetra ilaina amin'ny fahazoan-dàlana manokana
Olona na orinasa liana amin'ny fangatahana sy fahazoan-dàlana hividianana rongony any New Mexico dia tsy maintsy mandalo fizotr'izany. Ny olona na orinasa iray dia tsy maintsy mameno fangatahana fahazoan-dàlana.
Ny fepetra takiana manokana amin'ity karazana lisansa ity dia mbola tsy navoaka. Na izany aza, ny mpangataka rehetra dia tsy maintsy manaraka ireto fepetra manaraka ireto:
Ny fanomanana drafitra fandraharahana dia tsy dingana mandroso. Ary ny maodely fanapahana mofomamy izay hitanao manodidina ny tranonkala dia matetika no tsy manapaka. Ny ekipanay dia nanampy ny mpandraharaha maro hiomana Drafitra fandraharahana mahazo lisansa ho an'ny fanjakana isan-karazany, noho izany dia tokony hifandray aminay ianao raha mila fanampiana.
Rahoviana no misy olona afaka mangataka fahazoan-dàlana any New Mexico?
Hanomboka handray sy hikirakira ny mpamokatra rongony ny Diviziona Fanaraha-maso rongony, ary orinasa bitika mpamokatra rongony fahazoan-dalana manomboka ny 1 septambra 2021. Hanomboka hikirakira ny karazana fahazoan-dàlana hafa rehetra ny CCD aorian'ny 1 Janoary 2022.
FIVAVAHANA MISY: NY FITONDRAN-DRAFITRA BAROTRA an'i MEXICO ho an'ny mpamokatra CANNABIS
Tags:lisansa dispensia, Dispensary rongony New Mexico, fahazoan-dàlana rongony mexico vaovao, Dispensary any New Mexico